Ukusekwa kweNjongo: Ukuhlela kunye nokubeka phambili iiNjongo zakho zoBomi
Ukudala iindidi zeenjongo zakho kunye nokumisela amaxesha okuzifezekisa kukhulisa ukugxila kwakho kwaye kwandise amandla akho, anokunciphisa ixesha elifunekayo ukufezekisa iinjongo zakho. Ikwavumela ukuba ukhawuleze ubone ngokulula ukuba ingaba ixesha lakho lotyalo-mali kwiindawo ezahlukeneyo zobomi bakho kunye nobungakanani kunye nobunzima beenjongo zakho zilungelelaniswe ngokufanelekileyo.
I-doxylamine inceda i-25 mg
Injongo asikokusasaza inani elilinganayo kunye nobunzulu beenjongo phakathi kwezi ndidi zintandathu; Injongo kukuchonga ukuba ingaba olunye okanye amabini odidi alula xa kuthelekiswa namanye kunye nokufumanisa ukuba kufuneka unike ingqalelo ngakumbi kwezo ndawo zobomi bakho ukuziphuhlisa. Ekugqibeleni, injongo kukudala inkqubo ejikelezileyo yeenjongo ezijongana nomntu wakho wonke kwaye uya kuba nenkuthazo yokusebenza ngokwenene.
Hlela iinjongo zakho
Emva kokuba unike ixesha elibekiweyo kwiinjongo zakho ezingama-50, inyathelo lakho elilandelayo kukwabela icandelo ngalinye. Ngokuqhelekileyo, iinjongo zakho ziwela kwelinye lala macandelo amathandathu:
C = Iinjongo zomsebenzi
H = Iinjongo zezempilo
F = Iinjongo zosapho
M = Imali / iinjongo zezemali
S = iinjongo zokomoya
P = Iinjongo zobuqu
Xa umisela ukuba yeyiphi inqanaba injongo nganye ewela phantsi kwayo, uyakufumanisa ukuba ezinye iinjongo ziwela ngokwendalo kudidi oluthile. Injongo yokunyuselwa kwisuphavayiza emsebenzini, umzekelo, kulula uC. Ezinye iinjongo, nangona kunjalo, azikho lula ukubethelela. Ukubuyela esikolweni ukuze ufumane i-MBA kunokuba yi-C yomsebenzi, kodwa kunokuba yi-P yakho. Beka injongo nakoluphi na udidi osondele kakhulu kuyo, okanye uzive ukhululekile ukubeka iinjongo kwiindidi ezininzi.
Yenza uluhlu lweenjongo ezingama-50 ofuna ukuziphumeza kule minyaka ilishumi izayo. Emva koko buyela kuluhlu lwakho lweenjongo ezingama-50 kwaye ubhale ileta efanelekileyo ecaleni kwayo nganye. Emva kokuba ulebhelishe injongo nganye kudidi, bala inani elipheleleyo leenjongo onazo kudidi ngalunye uze urekhode loo manani kwitshathi elandelayo. Emva koko vavanya ukusasazeka kweenjongo zakho kuwo onke la macandelo ukuze ubone ukuba alungelelene kakuhle. Ngaba ukhanya kwiinjongo zempilo? Ngaba kufuneka unike ingqalelo ngakumbi kubomi bakho bokomoya?
Ukulinganisa iinjongo zakho kuzo zonke iindidi kule tshathi.
Ngaba ibuprofen ikwenza wozele
Nika ixesha elibekiweyo kwinjongo nganye
Unganayo nantoni na oyifunayo; awunakuba nayo yonke into ngexesha elinye kwaye ngoku. Kungenxa yokuba ubeka injongo yokulahla iiponti ezingama-20 oko akuthethi ukuba uya kuvuka ngomso ngeeponti ezingama-20 ezingekhoyo emzimbeni wakho. Ukufezekisa injongo yakho kubandakanya inkqubo efuna umsebenzi othile kunye nexesha.
Khumbula ukuba uluhlu lwakho oluhle lwamagama angama-50 ofuna ukuwufezekisa kule minyaka ili-10 izayo. Oko kwathethi, unokufuna ukubona ezinye zazo zizaliseka kwangoko. Ezinye zinokukhawuleza-unyaka nje ube kude. Abanye banokufuna ukuba uqale ufezekise iinjongo ezithile eziphakathi. Umzekelo, yithi injongo yakho kukuphinda kabini umvuzo wakho kwiminyaka emithathu. Uyazi ukuba akunakulindeleka ukuba ufumane naphina kufutshane neepesenti ezili-100 zokuphakamisa umsebenzi wakho wangoku, ke uqala ukuphonononga ezinye iindlela: umsebenzi omtsha ohlawula ngakumbi kwaye onendlela ekhawulezayo yomsebenzi, umsebenzi wesibini, ezizimeleyo okanye ikhontrakthi. iiprojekthi onokuzenza ngeeyure zakho zokungasebenzi, okanye utyalo-mali lokuthengiswa kwezindlu nomhlaba oluzisa ingeniso yerente.
Buyela umva kuluhlu lwakho lweenjongo ezingama-50 kwaye ubhale u-1, 3, 5, okanye u-10 ecaleni kwenjongo nganye ukubonisa ukuba uyafuna ukuyifezekisa loo nto kwisithuba seminyaka eli-1, 3, 5, okanye eli-10.
Xa uqala ukucinga ngexesha ekufuneka ulifikelele kwiinjongo zakho, qiniseka ukuba unengqiqo. Nokuba ngaba ixesha elisikiweyo leenjongo zakho lisengqiqweni kuxhomekeke kwimeko yakho. Ukukunceda uhlale kumkhondo, landela la manyathelo:
Cinga ixesha elimiselweyo onokuthanda ukufeza le njongo. Ngaba ungonwaba ukuba uyiphumezile unyaka okanye nokuba yiminyaka emithathu kamva kuneminqweno yakho, okanye ngaba uzimisele ukuyifeza ngexesha elithile?
Vavanya ubunzima beenjongo.
Chonga ukuba loluphi ulwazi olutsha okanye ezinye izixhobo onokuzifuna ukufezekisa injongo.
Cinga ngokuba leliphi ixesha elimiselweyo ukuze umntu afezekise iinjongo ezifanayo.
Emva kokuba ulebhelishe injongo nganye ngexesha elibekiweyo, bhala inani leenjongo onalo ngexesha ngalinye kwaye urekhode ezo totali kule theyibhile ilandelayo. Emva koko vavanya ukusasazeka kweenjongo zakho kuwo onke amaxesha ukuze ubone ukuba alungelelene kakuhle na.
Sebenzisa le theyibhile ukudibanisa iinjongo zakho ngexesha ngalinye.
Ngokukodwa xa kubandakanyeka imali, gcinani engqondweni ukuba kuya kufuneka niyonwabele inkqubo yokusebenzela iinjongo zakho. Nangona ukucwangcisela ikamva kubalulekile, uqinisekisiwe ngoku. Awufuni kuphanga lonke ulonwabo ngoku. Kungcono ukuhlala ubomi obulungeleleneyo ngelixa uphumeza isicwangciso sakho kwaye usilungelelanise njengoko kufuneka xa iimeko zikulahla.
indlela yokuvula ivenkile ebay
uhlobo lweepilisi zokuqhomfa
phi iipilisi ezinophahla
lexapro vs zoloft ukufumana ubunzima
Yintoni i-doxycycline esetyenziselwa ukunyanga?